Fitsidihana sy traikefa any Afrika Atsimo
Home » Toerana fitsangatsanganana » Fitsidihana sy traikefa any Afrika Atsimo
Araho ny dian'ny Mandela mankany amin'ny fahalalahana miaraka amin'ny Western & orient
Ireo mpanao fialantsasatra dia afaka manomboka amin'ny diany lavitra mankany amin'ny fahalalahana amin'ny làlan-kaleha vaovao ho an'ny taona 2018 avy any Western & orient - Manaraka ny dian-tongotra mankany amin'ny Freedom - Afrika atsimo an'i Nelson Mandela. Ny dia naharitra fito alina dia natomboka tamin'ny telo alina tao Cape Town, anisan'izany ny fitsidihana ny Nosy Robben sy fitsangantsanganana an-tongotra izay mampiditra fotoan-dehibe amin'ny fiainan'i Mandela, roa alina amin'ny Rovos Rail mandeha mankany Johannesburg, ary roa alina any Johannesburg, ao anatin'izany ny fitsangatsanganana apartheid sy tapany iray andro. fitsangatsanganana antsasaky ny andro any Soweto.
Ho fampahalalana bebe kokoa, kitiho eto.
Ankafizo fitsangatsanganana antsasakadiny amin'ny tanàna / Safari miaraka amin'ny Rainbow Tours
Ity fitsangatsanganana vaovao fito alina avy any Rainbow Tours ity dia natao hipetraka tanteraka amin'ny fialantsasatra antsasaky ny volana febroary na oktobra, miainga amin'ny zoma alina ary mody amin'ny alahady. Rehefa afaka efatra andro tao Cape Town, izay ahafahan'ny fianakaviana mankafy ny fomba fijery mahavariana avy any amin'ny Mountain Mountain, mitsidika ireo penguin any amin'ny Boulders Beach na mianatra momba ny fanagadrana an'i Nelson Mandela ao amin'ny Nosy Robben, dia nitohy nankany Cape Atsinanana nandritra ny telo alina ny dia tao amin'ny Kariega Private Game Reserve . Eto, ny fianakaviana dia afaka miroso amin'ny familiana lalao sy mandeha an-dalambe mikitroka mba hahitana ireo biby dia malaza indrindra atsy Afrika Atsimo toy ny zirafy, liona, zebra ary buffalo.
Fonosana fialantsasatra roa ho an'ny taona 2018 avy amin'ny Mantis Collection
Mantis Collection dia manolotra fonosana fialantsasatra roa ho an'ny Western Cape amin'ny taona 2018 - Mantis Madness and Baycation miaraka amin'i Mantis. Miaraka amin'i Mantis Madness, ny mpitsidika dia afaka manambatra fiatoana tanàna mankany Cape Town miaraka amin'ny safari dimy lehibe any Atsinanana, mamandrika roa alina ao amin'ny Founders Lodge ary mahazo roa alina maimaim-poana, ary mamandrika roa alina ao amin'ny Oceana Beach & Wildlife Reserve mankany mahazo maimaim-poana indray alina. Ny fonosana dia azo alefa amin'ny 1 Aogositra ka hatramin'ny 15 Desambra 2018 ary ao koa ny trano, sakafo ary kapila lalao roa isan'andro. Ahitana sakafo maraina isan'andro, sakafo hariva roa ary iray alina ao amin'ny Jazz Room Restaurant @ No. 5 ny fonosana ary ahafahan'ny vahiny miala sasatra sy misakafo amin'ny feon-tarika mivantana. Ho fanampin'ny toeram-ponenana, ny mpitsidika dia hahazo fidirana roa maimaim-poana amin'ny fidirana amin'ny fizahan-tany any Nelson Mandela Bay, miaraka amin'ny traikefa fanampiny maimaimpoana sy fihenam-bidy mihoatra ny 70 mahery.
Alao ny vanim-potoana miafina ao Grootbos
Ny volan'ny ririnina atsy Afrika atsimo no fotoana mety indrindra hitsidihan'ny Grootbos Private Nature Reserve, toeram-piarovana an-tany tontolo iainana any Andrefan'i Cape, lalana adiny roa miala an'i Cape Town. Grootbos dia voahodidin'ny tontolo tsy manam-paharoa amin'ny contour fynbos rakotra sy ny fitambaran'ireo zavamaniry sy zavamaniry izay nanjary loko marevaka tamin'ny volana ririnina. Ny volana antenatenany koa dia fotoana mety hijeren'ireo mpiala sasatra ny Cape Fur Seal, Great White Shark, Indo-Pacific Bottlenose Dolphin, African Penguin ary Southern Right Whale amin'ny safari an-dranomasina ary hijinja tantely miaraka amin'ny mpiompy tantely.
Labiera sy traikefa mahatsapa sensory ao amin'ny The Table Bay Hotel any Cape Town
Ny Table Bay Hotel by Sun International izay miorina eo amin'ny V&A Waterfront malaza dia manana labiera labiera vaovao sy manokana. Ny trano fandraisam-bahiny misy kintana dimy nosokafan'i Nelson Mandela tamin'ny Mey 1997 dia manolotra ny labiera manitra ala Wild Wild Weiss vaovao, namboarina niaraka tamin'ny kolontsaina sy ny toetrandro Cape Andrefana. Ny labiera 2600L an'ny The The Bay Bay dia hatonoana ary hosokafana, ary ho hita irery ao amin'ny The Table Bay Hotel. Ny Wild Legend dia mifanaraka tsara mandritra ny andro sy ny alina any Afrika Atsimo, miaraka amina fiaraha-misakafo trondro sy akorandriaka atolotry ny The Table Bay Hotel.
Ny Table Bay koa dia manolotra traikefa fisakafoanana manaitaitra mba hamenoana ny zava-pisotro misy labiera azy ireo. Ny fahatsapana Sensory Dinner dia hita ao amin'ny The Table Bay Camissa Brasserie izay manolotra fomba maoderina sy milamina amin'ny fisakafoana manentana ny lozisialy avy any an-toerana sy ny tsiro an-trano natambatra an'i Chef Jocelyn Myers Adam.
Ireo mpitsidika ao amin'ny The The Bay Bay izay maniry ny hahatsiaro ny fijanonany dia ho azony atao ny maka ny votoatin'ny fotoanany any Cape Town noho ny famoahana ny hanitra manokana an'i Table Bay - Kaap. Ny hanitra novokarina niaraka tamin'ny botanika 100% avy any Cape dia noforonin'i Tammy Frazer, Zafikelin'ny mpamorona solika an'ny Olay Graham Wulff ary izay mampiasa akora natoraly manokana ho an'ny ranomanitra artisanal tsirairay noforoniny. Ho hita eo amin'ny kabinetra ivelan'ny spa ny faritra Kaap.
Fialam-bolan'ny fianakaviana any Western Cape miaraka amin'i Ampersand Travel
Ampersand Travel dia manolotra fialantsasatra ho an'ny fianakaviana 13 andro any amin'ny Waterberg Area, Cape Town ary Hermanu. Ny fonosana dia misy fijanonana ao amin'ny Reserve Game of Madikwe any amin'ny Faritany Avaratra Andrefana izay ahafahan'ny ankizy mahita lalao, mandray anjara amin'ny lesona momba ny asa tanana sy asa tanana, manao pizza sy stargaze, alohan'ny handehanana any Cape Town hanao torapasika fasika fotsy sy hetsika toy ny surf ary tombo-kase sy penguin. Mijanona mandritra ny alina ao amin'ny hotely kintana One and Only misy kintana efatra sy sasany, misy ihany koa ny City Scavenger Hunt Tour ary ny Wild Child Cape Peninsula Tour izay ahafahan'ny ankizy mametaka sambo miaraka amin'ireo penguin ary mahita vaky sambo. Arahin'ilay fijanonana miala sasatra any Cape Point Vineyard ho an'ny vera Sauvignon Blanc sy ny fahitana ny Atlantika, ny dia dia nifarana tao Hermanus noho ny fijerena trozona sy fijanonana lafo vidy ao amin'ny paradisa ero-paradisa Grootbos izay manolotra mitaingina soavaly amoron-dranomasina sy karazan-tsakafo mahandro.
Mandehana amin'ny fanaraha-maso ny rhino miaraka amin'ny Vision of Africa
Vaovao ho an'ny taona 2018, Vision of Africa dia manolotra fialantsasatra 11 alina hiaina ny tsara indrindra amin'ny KwaZulu-Natal, ao anatin'izany ny fahafaha-manenjika rhino ao amin'ny Thanda Safari Private Game Reserve. Ny vahiny dia afaka mandray anjara mavitrika amin'ny fiarovana azy ireo amin'ny alàlan'ny fidirana amin'ny ekipa Rhino Monitoring Team hahitana ireo biby tandindomin-doza, hianatra mamaky ny lalany, mijery ny fihetsik'izy ireo sy ny fomba fihinany ary hahatakatra ny fandrahonana atrehin'izy ireo amin'ny maha-karazana azy. Ny fialantsasatra dia misy koa telo alina ao amin'ny Lalaria Lodge amin'ny morontsiraka Dolphin, izay nomena anarana toy izany ho an'ny mponina betsaka amin'ny feso ao anaty tavoahangy, izay ahafahan'ny mpitsidika mankafy ny lova ara-kolontsaina manan-karena ao aminy, ny jono tsara tarehy, ny morontsiraka volamena mahatalanjona ary ireo tanàna fialantsasatra mahafinaritra amoron-dranomasina. Ary farany, ny mpiala sasatra dia handany roa alina ao amin'ny St Lucia Wetlands Guesthouse any St Lucia izay manolotra bisikileta an-tendrombohitra, fitsangantsangana, fijerena vorona ary fotoana ahafahana mahita vorona, voay ary hipopotama ao amin'ny farihy St Lucia.